Kacha mma Medical OA Ladies ntutu mwepụ igwe / diode 808 laser reviews Manufacturer and Factory | KES
Medical CE ladies ntutu mwepụ igwe / diode 808 laser reviews
Ogologo ebili mmiri 808nm Standard755nm, 1064nm, Tri-wavelength nhọrọ
Changeable Abù size 9 * 9, 12 12, 12 * 18 nhọrọ
Ngwa nke 808nm ntutu mwepụ alma lasers diode laser: Nchekwa ntutu na-adịgide adịgide na-adịgide adịgide na ụdị anụ ahụ niile; enweghị mgbu, dị mma nke ọma n'oge ọgwụgwọ ahụ; Kwesịrị ekwesị maka ntutu ọ bụla achọghị na mpaghara dị ka ihu, ogwe aka, armpits, obi, azụ, bikini, ụkwụ… ọ na-emekwa ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ ma na-eme ka akpụkpọ ahụ sie ike n'otu oge.
1) Mbelata ntutu ntutu na-adịgide adịgide na ntutu niile na-acha ụcha na ụdị anụ ahụ niile — gụnyere akpụkpọ anụ.
2) Mgbu-Na-enweghị Mgbu, Na-enweghị Ego - Nwepụ Ntutu Obi
·Safe na Ala, Abamuru Abụọ
Igwe Mwepụ Ntutu Laser na-eji okpukpu abụọ TEC Active Cooling Modular na-eweta mmetụta jụrụ oyi. Ugboro abụọ TEC na-amalite ịrụ ọrụ mgbe mmiri dị n'elu 25 Celsius C, iji jide n'aka na mmiri dị n'etiti 25 Celsius na 30 Celsius C, na sapphire dị ọcha zuru oke. N'okwu a, a na-enweta ọgwụgwọ kachasị mma na nke kachasị mma. Super ogologo oge na-aga n'ihu na-arụ ọrụ oge ga-okpukpu abụọ azụmahịa gị.
·Easy Touch na ọgụgụ isi Diagnostic System
Igwe na-ewepu ntutu laser site na ngwanrọ mmetụ dị mfe na-enye ntọala a tụrụ aro maka ụdị anụ dị iche iche na agba ntutu iji kwụsị ndị ọrụ, na-eme ka ọrụ ghara isi ike ọzọ. Smart njehie na-achọpụta ọrịa usoro na-arụ ọrụ ndetu maka ihe ndị dị mkpa dị ka Fans, mgbapụta na obi jụrụ usoro. Ọkara oge gị na ọnụ ahịa itinye ego na ya mgbe ọrụ ahịa gachara.
Medical OA zụta a ntutu mwepụ laser igwe / bes ...
Medical OA kacha mma laser ntutu mwepụ ngwaọrụ / shr d ...
Medical CE ipl laser ntutu mwepụ handset / best ...
Medical OA laser ntutu mwepụ ìhè ntutu / laser ...
Medical OA ntutu mwepụ igwe n'ihi na ndị inyom / mgbu ...